Kanbanflow - codsi wanaagsan oo lagu xakameeyo howlaha sugaya - Geofumadas
Juunyo, 2019 tabo cusub, Internet iyo Blogs
Kanbanflow, waa qalab wax-soo-saarka, kaas oo loo adeegsan karo barta shabakadda ama qalabyada mobile, waxaa si ballaaran loo isticmaalaa xiriirka shaqada ee fog, taas oo ah, nooca xorta ah; iyada oo ururada ama kooxaha shaqeeya ay arki karaan horumarka hawlaha xubin kasta oo ka mid ah. Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa leh hawlo badan oo aanad garanayn sida loo abaabulo, ama aad haysato shaqaale badan oo aadan aqoonin sida loo kormeerayo horumarkaaga, Kanbanflow waa adiga.
In this article, isticmaalka this qalab si buuxda oo lacag la'aan ah ku tusi doonaa, iyada oo tusaale; maaha iyada oo aan marka hore muujineynin aragtida guud ama dashboard. web interface waa mid fudud ilaa xad, inay soo galaan waxaad ka arki kartaa bar a weyn ee ay ku jiraan: button menu - boards- (1), farriimaha (2), qaabeynta (3), taageerada (4) iyo profile of qofka oo ka tirsan ururka (5).
Sidoo kale, waxaa jira laba tab oo kujira aragtida guud, mid –boodh- halkaasoo ay ku yaalliin dhammaan looxyada la abuuray, oo uu iska leeyahay xubinta ka soo baxday madasha, iyo waliba kuwa ay abuureen kormeerayaasha isla markiiba.
Xubnaha labaad - xubno ka tirsan dhamaan xubnaha ka tirsan kooxda shaqada iyo emailkooda.
Si aad u muujiso qaliinka si fiican, tusaale ayaa laga sameyn doonaa meeleyn dhab ah.
1. Samee guddi: waxaad abuuri kartaa guddiyo badan sida aad rabto, kuwan ayaa ah in dhammaan hawlaha la maareyn doono oo la meeleynayo. Si aad u abuurto guddiga, waxaa jira laba doorasho, mid ka mid ah aragtida ugu muhiimsan ee qalabka, meesha aad gujisid badhanka u abuuro guddiga - aaminsan (1) iyo kan labaadna wuxuu ku xiran yahay badhanka habka (2); waxaa jira aragtida ururka, iyo xaddiga guddiyada ay leedahay iyo badhanka abuurto guddi.
2. Waa suurtagal in la abuuro guddi iyadoo la dooranayo mid ka mid ah xulashooyinka soo socda: kanban board, tan waxaad ku abuureysaa guddi ay ku qoran yihiin tiirarka aad doorbideyso, xulashada labaad ayaa ah inaad nuqul ka sameysid guddi horey loo abuuray (isla qaab dhismeedkaas ah), kan saddexaadna waa abuuro dashboard muujinaya macluumaadka dashboodyada badan ee ururku leeyahay.
3. Waxay ka bilaabantaa ikhtiyaarka koowaad, halkaasoo magaca guddiga lagu magacaabo (1), waana la doortaa haddii guddiga uu ka mid yahay urur, ama uu isticmaalo madax banaan (2). Nidaamka ayaa la socda (3), iyo daaqada midig ayaa la furay, nidaamku wuxuu furayaa tiirarka 4 by default (4), mid kasta waxay muujinaysaa heerka horumarka ee hawl kasta. Magacyada waa la bedeli karaa waxaana sidoo kale lagu hagaajin karaa iyada oo ku xiran jihada iyo baahida kooxda shaqada, ku darista ama tirtiridda tiirarka (5), geedi socodka waa la raacayaa (6).
4. Qodobka soo socda ayaa ah in la caddeeyo tiirarka shaqooyinka la dhammaystiray la dhigayo (1), haddii qalabku abuuro tiir cusub, ama haddii aan loo baahnayn in lagu caddeeyo (2) guddiga hadda jira. Tallaabada ugu dambeysa waa in la muujiyo inta hawlood ee la waafajin karo tiir kasta - WIP (4), hawsha (5) way dhammaatay.
5. Dhamaadka guddiga ayaa lagu arkay in lagu daro hawlaha, aad riix on iskutallaabta cagaaran ee soo socota si ay u magac kasta column (1), daaqad la faahfaahinta hawsha, magaca furmay - column aad deggan tahay (fikradaha ) (2), midabka suuqa kala doorashada, xubnaha hawshan la xidhiidha in la tags search fiican (3), description ee meelaynta (4) la xiriira comments (5). dhinaca midigta ee daaqadda, taxane ah qalabka si ay u sameeyaan caddaymaha dheeraad ah oo ku saabsan hawsha (6).
Isticmaalka midabada shaqooyinka ayaa noqon kara kuwo ku haboon dad badan, maaddaama kuwan ay suurtogal tahay in la kala gooyo geeddi-socodka gebi ahaanba kala duwan ama si siman, si aad u muujiso horumarka hawlaha mid kasta oo ka mid ah hawlaha si dhakhso ah.
Faallooyinka, waa qodob kale oo ka dhigaya qalabkan weyn, tan iyo milkiilaha guddida, ama kormeeraha hawlaha ayaa tilmaamaya qeexitaano ku saabsan waxqabadka, waa hab kale oo la xidhiidha xubinta fuliya geedi socodka lafteeda.
6. Qalabka caawiya in si fiican loo maareeyo hawsha waa kuwan soo socda: Ku dar (1): waxaad ku dari kartaa sharraxaad, xubno, tags, subtasks, waqtiga kama dambaysta ah, waqtiga la qiyaasay ee muddada, waqtiga gacanta, faallooyinka,
Ku dhaqaaq (2): u gudbi guddi kale ama tiir kale. Waqtiga (3): Bilaw inaad dib u bilowdid (miiska), tani waxay leedahay tilmaanta isdhexgalka farsamada pomodoro, taas oo ka kooban wakhti go'an oo go'an oo u dhexeeya daqiiqadaha 25 iyo 50; Waa gabi ahaanba lagu xakameyn karo iyadoo la adeegsanayo qaab-dhismeedkeeda mar uu bilowday. Warbixinnada (4): warbixinta natiijooyinka. More (5): Abuuri URL xiriir la leh hawsha. Tirtir (6): tirtir
Wararka fikrad ah waxa uu ahaa mid horumar hawsha, oo sidaas daraaddeed qofka yelsinkii ku siin kara. laftiisa fududeeyaa, qofka madaxda u ah aan la qaban warbixinta dibadda si madal, waxa waqti lumis ahaan loo aqoonsan lahaa. Sidoo kale, farsamo pomodoro ogol hawl daqiiqadii 50, fuliyaha ee muddooyinka intiisa kale hawlaha ku siin karaan 5 daqiiqo, kuwaas oo meelaha yar oo nasasho waxaa lagu magacaabaa pomodoros, ka dib markii qof ururayaa 4 pomodoros, inta kale xigta waxay noqon doontaa daqiiqado 15.
7. Hawlaha hoose ayaa fure u ah aasaasida meeleynta, tan maxaa yeelay, iyaga ayaga, waxaa suuragal ah in lagu garto inta ay hawshu ku talaabsatay, ka dib marka la caddeeyo, jeeg ayaa lagu sameeyaa mid kasta oo ka mid ah sanaadiiqda, illaa laga go'aaminayo. in hawshu dhammaatay oo hawsha loo wareejin karo sadarka waxqabadyada la dhammaystiray.
8. Ka dib markii doorbidyada la aasaasay, meelayntu waa sida soo socota, waxaana lagu darayaa tiirka u dhigma.
9. Markay hawshu xaalad iska beddesho, waxaa si fudud loogula tagayaa tilmaame oo lagu jiidayaa meeshii la tixgeliyey Si kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah in la xaddido, in howlaha cusub aan lagu soo dari karin, illaa inta hawsha ku socota laga fulinayo, tani waa hab lagu hubinayo in dhammaan howlaha la dhammeeyo, dadkuna aysan si mug leh ugu darin howlaha aan hadhow la qaban way dhamaysan karaan.
10. Waa aalad gabi ahaanba la habeyn karo, qaabeynta looxyada, waxaad qeexi kartaa noocyada kale ee astaamaha, sida bedelida magaca, milkiilaha, haddii aad rabto inaad ururiso ama aad dhaqaajiso ururka, sheeg midabada guddi kasta, waqtiga xaddidan, unugyada qiyaasta (dhibcaha ama waqtiga)
11. Mobilka waxaad kala socon kartaa howlaha, adigoo adeegsanaya biraawsarka aad dooratay, maahan barnaamij mobiil, oo laga soo dejisan karo dukaan kasta oo app ah, si kastaba ha noqotee, si loo xaqiijiyo xaalada shaqooyinka halka aysan jirin kombiyuutar kuu dhow aad ayuu faa'iido u leeyahay.
12. Looxyada waa la muujiyaa, oo sida muuqata mid kasta oo ka mid ah shaqooyinka la abuuray, si loo muujiyo tiir kasta, si fudud u dulqaad shaashadda si dhammaan howlaha iyo heerka horumarkooda loo muujiyo.
Waa talaabo weyn oo loogu talagalay hoggaamiyeyaasha ganacsiyada yaryar, ganacsatada digital iyo xitaa dadka u baahan inay isu abaabulaan hawshooda (sida ardayda ama mashaariicda shakhsi ahaaneed), kuwanna waa kuwo isku dhafan .
Intaa waxaa dheer, waa hab ay kormeerayaasha u xilsaaraan dhaqdhaqaaqa kooxahooda. Waa arrin xiiso leh, sida qalab bilaash ah oo sidan oo kale ah, waxaa suurtagal ah in la arko dhaqdhaqaaqyada ururka, ma aha mid xadidan marka la eego mid ka mid ah waxqabadka, ma jiraan wax tallaabo ah oo la xakameeyay, taas oo siinaysa xoriyad ka weyn isticmaalka. Iyo, haddii taasi aysan ku filneyn, ma dhamaato shaqaaluhu in ay hawlaha la xilsaaro - waxay ku dhacdaa agendas, buug-yaraha iyo xafiisyada kale ee xafiisyada-, tani waa mid kale oo lagu daray oo kaa dhigaysa inaad u haajirto xogtaada qalabkan.
Waxaan rajeyneynaa in ay ahayd mid waxtar leh, kuna martiqaadeyso dhinacyada xiisaha leh in ay helaan Kanbanflow laga soo bilaabo boggaaga, ama shabakadda gacanta, waxay noqon doontaa habab dhan oo lagu galo wax soo saarka da 'dijitaalka ah hab fudud oo saaxiibtinimo leh.
Post Previous" Hore Chronicle - FME World Tour Barcelona
Post Next Koorso bilaash ah 'AutoCAD' - khadka tooska ahNext »